बाबुराम भन्छन्ः ५ वर्ष कायकाल पुरा भएको कुन मितिलाई मान्ने, सबैभन्दा उत्तम तीनवटै तहको चुनाव एकै मितिमा - Everest Dainik - News from Nepal
काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी संघीय परिषदका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले तीनवटै निर्वाचन एउटै मितिमा गर्नु व्यवहारिक दृष्टिले उत्तम हुने बताएका छन् ।
कार्यकालको गणनालाई लिएर संविधान र कानुन नै आपसमा बाझिएकोले एकैमितिमा निर्वाचन व्यवहारिक र व्यवस्थापनका दृष्टिले समेत राम्रो हुने उनको तर्क छ ।
कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित कुराकानीमा भट्टराईले भनेका छन, संविधानले स्थानीय तहको कार्यकाल पाँच वर्ष हुन्छ र कार्यकाल सकिएको ६ महिनाभित्र चुनाव गरिसक्नुपर्छ भनेको छ । कानुनमा दुई महिनाअगाडि चुनाव गर्ने भनिएको छ । यहाँ बाझियो ।
नेता भट्टराईले अगाडि भनेका छनः
अर्को, कार्यकाल पूरा हुने त भनियो तर कुन मितिलाई मान्ने ? स्थानीय तहको वैशाख ३१, असार १४ र असोज २ मा गरी तीन पटक चुनाव भएको छ । त्यसैले केहीको कार्यकाल वैशाख, अर्कोको असार र असोजमा सकिने भयो । कि त तीनवटाको अलग–अलग मान्नुपर्‍यो । कानुनमा पहिलोलाई हेरेर जेठ ५ सम्म भनेर लेखिदिए । अन्तिमवालाले मुद्दा हाल्यो भने के हुन्छ ? त्यसमा अदालतले फैसला गरिदियो भने के हुन्छ ?यो पनि समस्या छ । त्यसकारण पाँच वर्ष कुन हो भनेर संविधानले भन्नुपर्‍यो । कानुन र संविधान बाझिँदा संविधानले प्रिभेल गर्छ । यसमा पनि झन्झट हुन्छ । त्यसकारण यसको पनि हल गर्नुपर्‍यो ।
हाम्रो जस्तो देशमा प्रत्येक पाँच वर्षमा जेठबाट चुनाव सुरु हुने भयो । अहिलेकै व्यवस्थालाई पछ्याइराख्ने हो भने जेठदेखि सुरु गरेर फागुनसम्म ९ महिना चुनावमा जान्छ । यसलाई पनि हल गर्नुपर्‍यो । त्यसको निम्ति जनता, संविधान, कानुनविद्, मिडियालगायतसँग छलफल गर्ने र यी समस्याको हल गर्ने भन्ने कुरा समन्वय समितिको बैठकमा भएको छ । अहिले हल गरिएन भने पछिसम्म यही भइराख्छ । चानचुने कुरा होइन यो । हामी हावामा बग्छौं । उल्टो हाम्रो लोकतान्त्रिक निष्ठामाथि प्रश्न गर्ने हो ? केपी ओलीले दुई–दुई पटक विघटन गर्दा त्यसको विरुद्धमा लडेर पुनस्स्थापनाबाट ट्रयाकमा ल्याउने मान्छे हामी लोकतन्त्रविरोधी हुन्छौं ? सबैभन्दा राम्रो संवैधानिक विधि खोजेर तीनवटै चुनाव एकै दिन वा नजिक–नजिक दिनमा गरियो भने आर्थिक हिसाबले र व्यवस्थापन पनि सहज हुन्छ ।